Minister Bartlett Vanotungamira kune yakakosha UNWTO General Assembly
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Jamaica Kupwanya Nhau » Minister Bartlett Vanotungamira kune yakakosha UNWTO General Assembly
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Caribbean • Hurumende Nhau • Jamaica Kupwanya Nhau • misangano • nhau • Spain Kuputsa Nhau • ushanyi • Kufamba Wire Nhau
Musangano weGeneral Assembly uchatarisa nezvekuvandudzwa, dzidzo, budiriro yekumaruwa, uye basa rekushanya mukukura kwakabatana. Pamusoro pezvo, chirongwa ichi chinosanganisira kubvumidzwa kwezvigadziriso zvakarongwa kuUNWTO Affiliate Membership Legal Framework, iyo UNWTO Students 'League fainari, uye kugadzwa kweMunyori Mukuru weUNWTO kwenguva 2022-2025.
"Chiitiko ichi chichaitawo Makwikwi eVhidhiyo, ayo anosanganisira mapoka maviri: Exceptional Tales of Tourism Resilience uye Tourism Promotion uye Makumi Ekuita. General Assembly ndiyo musangano mukuru weUNWTO uye nzvimbo yekuti Nyika dziri nhengo dzitambire chirongwa cheUNWTO chemakore maviri uye bhajeti ra2022-2023, "Gurukota rakatsanangura.
UNWTO ine nyika zana nemakumi mashanu nepfumbamwe, General Assembly riri iro sangano guru reUNWTO. Zvirongwa zvaro zvakajairika zvinoitwa makore maviri ega ega uye zvinopindwa nenhume dzeVakazara uye Vanobatana Nhengo.
“General Assembly ndiwo musangano unonyanya kukosha wevakuru vakuru vezvekushanyirwa kwenyika nevamiriri vebazi rakazvimirira repamusoro pasi rose. Ndiko kuungana kukuru kweUNWTO uye kunosangana kubvumidza bhajeti nechirongwa chebasa uye nharo dzenyaya dzakakosha kuchikamu chekushanya," Gurukota Bartlett vakatsanangura.
Jamaica Tourism Minister Bartlett vanotarisirwa kudzoka kuchitsuwa musi wa5 Zvita 2021.